I-Studio27 yindawo yezihambi zanamuhla, ehlanganisa ukunethezeka nokunethezeka kwesimanje, njengethala eliphezu kophahla kanye neJacuzzi. Kokubili kuyindlela yokubalekela isiphithiphithi sedolobha kanye nendawo yokufinyelela ekahle yokuya endaweni ehamba phambili yedolobha. Isitudiyo sinobunikazi baso obukhuthazwe ulwazi oluphilwa umsunguli wethu kumasipala ngamunye wase-Dominican Republic. Ukwenza isitudiyo ngasinye sibe yinto eyingqayizivele yokuthatha umcabango wakho emigwaqweni nezindawo zalesi siqhingi esihle.
IStudio27 inikeza indawo yokuhlala enhle, evikelekile kodwa esondelene enhliziyweni yeSanto Domingo. Ukuziqhayisa ngendawo enhle, eduze kwetheminali yeCaribe Tours, iMetro yesiteshi esikhulu saseSanto Domingo, kanye nePalacio of Deportes, iStudio27 izokunikeza ithuba lokufinyelela kalula kuzo zonke iziza zedolobha elikhulu.
Itholakala khona kanye ngo-27 February Avenue futhi eduze ne-Avenue Maximo Gomez iyenza ibe indawo ekahle, isikhumulo sezindiza sase-Santo Domingo siqhele ngamaminithi angu-30, isiteshi sesitimela siwuhambo lwemizuzu eyi-10 kanti iSambil Mall iwuhambo lwemizuzu eyi-10-12.
Ekupheleni kosuku, thatha ingilazi yewayini bese unethezekile phezu kwethala lethu elisophahleni ukuze ukhangwe ukushona kwelanga okuhle kakhulu noma uvele ucwile e-Jacuzzi ngenkathi ujabulela umculo.
Abasebenzi bethu be-24/7 abanobungane nabanolwazi, kuhlanganiswe nensizakalo yethu emangalisayo kuzokunikeza umoya ofudumele wokuqinisekisa ukuthi uyakujabulela ukuhlala kwakho nathi.
Woza uzivumele ujatshuliswe ukunaka imininingwane kanye nokuhlotshiswa okumangalisayo kuyilapho ugcina umuzwa ojulile wendlu yesivakashi endaweni efana nehhotela.
Lesi situdiyo siphefumulelwe idolobha laseCambita umgodi wamanzi obalulekile ongowomfula omkhulu we-Nigua, endaweni yawo kunemifudlana engenakubalwa, imifudlana, imihosha, nemifudlana yamanzi ewela izintaba, amagquma futhi anomswakama. lo masipala ukwenza izindlela zamanzi ezigelezela emfuleni i-Yubazo, i-tributary yoMfula iNigua. Umfula iYubazo, ongenela ngqo eMfuleni iNigua eDolobheni laseSan Cristóbal, uzalelwa ezintabeni eziphakeme neziphakeme eziwuzungezile, ugelezela emfuleni (Nigua) ophinde uwele ingxenye yendawo yalo masipala enyakatho-ntshonalanga. , njengoba idlula i-Cambita ithatha igama lika-El Tablazo yingakho leli gumbi ligcwele imibala egqamile namandla anokuthula azungeze sonke isitudiyo, ukhuni olukhanyayo nokukhanya okukhazimulayo kwenza leli gumbi libe indawo ekahle yokuphumula nokuphumula ngemva kosuku olude. emsebenzini noma ukuhlola lesi siqhingi esiwumlingo. Igumbi linombhede omkhulu wendlovukazi kamatilasi, ideski elizinikele emsebenzini, isisefo sokuvikela izinto zakho eziyigugu kakhulu, i-microwave, umshini wekhofi, isiqandisi esincane, i-WIFI, nokuningi.
I-Barahona 303 inendawo yokusebenzela ehlukanisiwe enehhovisi lasekhaya, elilungele isihambi esikude esisebenzayo, umbhali ogqugquzelwe, noma umhloli wamazwe oshisekayo odinga isikhala ukuze ahlelele uhambo.
Igumbi lokugezela le-in-studio langasese likunikeza ithuba lokuvuselela nokufaka kabusha ngemuva kokuhlola usuku olude. Izinto zangasese ezisezingeni eliphezulu namathawula ekhwalithi yehhotela asethelwe ukwenza ukuhlala kwakho kube ukuhlala kwezinkanyezi ezi-5. Izicelo ezikhethekile zingenziwa, njengesethi yothando ukumangaza othandekayo wakho.
4.80 ·25 okushiwo abanye
IStudio27 itholakala endaweni ekhethekile futhi ehlonishwayo yaseMira Flores khona kanye ngomhla zingama-27 kuFebhuwari avenue, umthambo omkhulu edolobheni, uzungezwe izindawo zokudlela futhi eduze nezindawo ezinkulu zedolobha.